Ntuziaka 20 maka ịkwọ ụgbọ okporo ụzọ dị mkpa maka ahịa gị na-egosi ụlọ ntu | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 3, 2019 Satọde, Ọgọstụ 3, 2019 Douglas Karr
Ahịa ahia nwere uru dị iche iche na-eme ka ha laghachi na ntinye ego maka ahịa ahịa gị. Ndị na-ege ntị kachasị mkpa, ndị bịara ya nwere ike nwee mmefu ego, ụlọ ọrụ na-eziga ndị ọrụ ha nyocha nyocha mkpebi ịzụta. Nke ahụ bụ trifecta nke uru.
Ọ naghị abịa n'enweghị ego. Gbazite ụlọ ndò bu ezigbo ego ma na - arụ ọrụ iji nweta okporo ụzọ n’ụlọ ntu gị bụ agha… n’etiti gị na ụlọ ntu ọ bụla na mmemme ahụ. Yabụ, kedu ụdị ihe ị ga - eme iji kwụọ ụgwọ ụlọ ahịa wee nwee atụmanya ịbịakwute gị?
Chepụta ụlọ ndozi mara mma - inwe ụlọ ntu nke na-enye ebe dị jụụ, ebe izu ike ọha, ebe ọzụzụ, yana akara ngosi dị oke mkpa. Onwe m, ana m akwado ndị ahịa m ịbịa n'isi ụtụtụ ma bulie ụyọkọ tiivi n'otu ụlọ ahịa dị na mpaghara wee nye ha emesịa na ọrụ ebere mpaghara, ụka, ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ. Gbazinye ego ma ọ bụ bupu ha enweghị isi ọzọ… na akwụkwọ akara achọrọ ebipụtara gbanwere. Chepụta ụlọ ndò nwere ọtụtụ ohere maka ndị nlekota ma ị nwere ike igosipụta ihe ọ bụla masịrị gị!
Lezienụ ezigbo ala na ụlọ - Lee anya na ngosi ngosi azụmahịa wee chọpụta ebe enwere nnukwu okporo ụzọ - ntinye, ụzọ ọpụpụ, ụlọ nri nri, ụlọ mposi, ebe chaja… ọ ga-eju gị anya na ị nwere ike ịnweta ụlọ ndozi dị ọnụ ala na nso mpaghara okporo ụzọ dị elu nke na-adịghị nso ọnụ ụzọ. Fọdụ ihe ngosi ahia na-enyekwa ihe ntanye ụlọ… ụzọ dị mma maka ndị mmadụ iji chọta ụlọ ntu gị site n'ofe ogbako ahụ.
Zụlite akwụkwọ na kaadị azụmaahịa - Ọtụtụ ndị bịara ya na-atụ ụjọ ịkwụsị ụlọ ntu maka ịtụ ụjọ ijide ha na mkparịta ụka ahịa. Agbanyeghị, ọtụtụ ga-agagharị n'ụlọ ntu ma bulie otu akwụkwọ nke na-akọwa ngwaahịa, ọrụ gị, ma ọ bụ na-enye ndụmọdụ ụlọ ọrụ. Ezochila akwụkwọ ma ọ bụ kaadị azụmaahịa ndị ọrụ gị - tinye ha n’ebe ọ bụla dị mfe ma kwe ka ndị mmadụ jidere wee laa.
Mepụta nkwupụta na loops - need chọrọ ihe iji gosipụta ndị nyocha ahụ - yabụ kpachara anya na ndị otu eserese gị ga-emepụta ụfọdụ ọmarịcha ngosi nke enwere ike ịhụ site n'ebe dị anya ma jide ndị mmadụ 'anya. M na-azụtakarị loops vidio ma na-etinye ha na ihuenyo zuru oke ma gbanyụọ ihuenyo ahụ.
Nwee edo edo - Inwe uwe mara mma mara mma nke logo'd mara mma na onye ọ bụla na-eyi uwe otu agba ga-eme ka ọ dịrị ndị ọrụ gị mfe ịpụ na ụlọ ndozi. Aga m akwado ịgba agba pụrụ iche nke inline na logo gị. Ọ bụrụ na njirimara gị bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ - nweta uwe elu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere njirimara gị n’acha ọcha. Uwe ojii ma ọ bụ oji ojii nke nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-esiri ike ịchọta.
Ahụ ike - You'll ga - ahụ swiit na donuts ebe niile na ọgbakọ ọgbakọ, mana kedụ maka nnukwu protein, nri obere shuga? Ndị mmadụ maara ahụ ike n'oge a ma ị ga - abụ ọkaibe ma ọ bụrụ na ị na - ewepụta nri dị mma maka ndị ọbịa kwa elekere ole na ole.
Akpa na Shwag - Ekwenyesiri m ike na nkata nkwata ụlọ nkwari akụ jupụtara na tọn dị ala mgbe ọ na-emechi ihe ngosi azụmahịa. Y’oburu na ichoro ihe di onu ala inye ego, etinyela nsogbu. Tinye ego n’obere obere, pụrụ iche, maa mma, ma baa uru nke nwere ike ịdị mfe itinye n’ime akpati bụ mgbe niile nnukwu ego. Mepụta nnukwu akpa dịkwa mma dịka ndị mmadụ ga-eji akara ngosi gị na-agagharị ụbọchị niile.
Mee ka hashtags mara - Chọta hashtag ogbako, hashtag obodo, ma mepee hashtag ụlọ ọrụ gị ebe ị nwere ike ịkwanye mmelite na akụkọ n'oge mmemme ahụ. Jiri usoro mgbasa ozi gị dị ka ihe enyemaka nye ndị ọzọ na ụlọ ọrụ, ọ bụghị naanị iji kwalite ọnụnọ gị.
Nyochaa hashtags - Ndị na - ekwu okwu, ndị na - ekwu okwu na ndị bịara ya ga - akwalite eziokwu ahụ na ha na - aga ahịa ahịa ma ọ bụ ọgbakọ. Jiri nlekota oru mgbasa ozi na-elekọta mmadụ tupu ihe omume ahụ weghara ndị ndị ahụ bụ, mee nyocha ha, ma kpọọ ha n'ụlọ ntu ma ọ bụ mmemme VIP. Ileba anya n'oge na mgbe maka ihe njikọ ohere.
Kwuo okwu na mmemme a - Ọ bụrụ na enwere ụzọ ọ bụla iji mee nke a, tinye akwụkwọ ka inwe ọkà okwu na mmemme ahụ. Ihe ngosi kwesiri ibu ihe omuma, obughi uzo ahia. Iguzo n’azụ ụlọ na inyefe kaadị nwere ike ịrụ ọrụ, mana ọ na-enwekwu mmetụta mgbe ị bụ onye nọ n’ihu ndị bịara nzukọ ime ụlọ.
Profaịlụ ndị na-ege ntị - Oge bụ onye iro gị na ogbako yabụ ghọta ihe ebum n’uche gị bụ maka ndị ị chọrọ izute na ole. Kpamkpam mee ka ndị bịara ma ọ bụrụ na ha ezute ndị na-ege gị ntị ka ha wee ghọta nke ọma ihe kpatara ha kwesịrị iji kwụsị ụlọ ntu gị.
Kwalite nkwalite ọnụnọ gị - Ozugbo ị buliri ụlọ ntu, chepụta maapụ ma kwalite usoro ihe omume gị, akụrụngwa, yana otu na-aga n'ihu na-eduga na ogbako ma ọ bụ ngosi ahịa. Nye ndị na-eme ihe, atụmanya, na ndị ahịa ohere ịdebanye aha na ndị otu gị nọ ebe ahụ.
Ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-eme egwuregwu - Jụọ onye na - eme ihe nkiri ka o kwuo okwu na mmemme ahụ ma nye ha ohere ime ya. Ọ bụrụ na mmadụ na-ekwu okwu na mmemme ahụ, ha bụ nnukwu ebumnuche ka ha kwụsị ma nye obere ihe ngosi n'ụlọ ntu gị nke bara ndị na-ege gị ntị uru. Ha abanyela ebe ahụ ma na-akwalite mmemme ahụ them jiri ha n'ụlọ ntu gị iji chụọ ahịa! Ndị na-eme mkpọtụ? Enwekwara m ndị enyi na-eme a ihe ngosipụta uche ha na-arụkwa ọrụ maka nnukwu ụlọ ọrụ. Ha na-etolite otu ọrụ maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ, wee wulite atụmatụ nke na-eduga, wee nyefee ndị bịara ya ọrụ n'aka ndị ọrụ ime. Ọ na-arụ ọrụ n'enweghị ntụpọ.
Zụlite Oku-Ime Ihe - Kedu ihe ị na-akwalite na mmemme ahụ? Kedu ihe bụ ozi gị na isi okwu gị? Kedu ihe ị chọrọ ka ndị ọbịa mee ozugbo ị jikọtara ha? Nwee atụmatụ egwuregwu, kwalite ya n’ime na mputa, ma hụ na ị nwere ụzọ ịgbaso na tụọ mmetụta nke ihe omume ahụ.
Anakọta ozi bịara - Ma ọ bụ n’efere azụ maka kaadị azụmaahịa ma ọ bụ nyocha maka baajị ndị bịara ya, gbalịa nakọta ọtụtụ ozi dịka ị nwere ike. Y’oburu n’icho igha ibu onye isi, nwee akwukwo ndetu na mkpuruedemede nke idere ihe edeturu n’onye obula ijuru data. Nke a ga - enyere gị aka kewaa ha ma emechaa maka nkwukọrịta kwesịrị ekwesị.
Na-ebi ndụ na mmekọrịta - Ọ bụrụ n ’ịnwere ụfọdụ ndị ọrụ n’ ebe, gwa ha ka ha gaa nnọkọ ukwu ma kesaa isi okwu nke ngosi ahụ na soshal midia (iji hashtags). Soro ma kwalite ndị ọkà okwu na-abịa ka ha bụrụ ezigbo njikọta na ụlọ ọrụ ahụ.
Were foto na vidiyo - Mee ka ndị ọrụ gị nọrọ na nche maka nnukwu ohere ịgba ajụjụ ọnụ ma ọ bụ were foto. Ka ị na-asọrịta mmadụ ọ bụla, ị nwere ike ịkekọrịta ihe ndị a n'oge. Mgbe ihe omume ahụ gasịrị, ịnwere ike ịme vidiyo post-ihe omume nke ị nwere ike ịkwalite n'ịntanetị.
Mmekọ na ọrụ ebere - N’oge na-adịbeghị anya na ihe omume, a na m achọpụta na ụfọdụ ụlọ ọrụ na-emekọ ihe na ndị ọrụ ebere iji chụpụ ọtụtụ okporo ụzọ n’ụlọ ntu ha. N'otu ihe omume, ha rere ọbụna t-shirts omume ha site na ụlọ ntu ha na ego ha niile na-aga ọrụ ebere. Bolọ ntu ahụ jupụtara na mmiri! Ha rere ọtụtụ puku uwe elu… na-enyere ndị ọrụ ebere aka ma na-ele ndị bịara ya anya
Nye ma kwalite ihe omume VIP - O juru m anya na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aga naanị ụlọ mmanya ma ọ bụ laghachi na ụlọ nkwari akụ iji nweta ọrụ na mmemme. Hazie ndokwa maka nri abalị gị na ndị na-eme ihe ike, atụmanya dị ukwuu, ma ọ bụ ndị ahịa dị mkpa ugbu a. Emeela m mmekọrịta dị ukwuu na ụlọ ọrụ ndị gụnyere ọrụ limo na ụlọ ndozi VIP n'otu mpaghara. FOMO mere ka ndị ọzọ nwee ike ijikọ na ụlọ ọrụ na ihe omume kachasị mma.
Kechie-Omume Kechie - Na mmemme nke mba, anyị rịọrọ maka nkwuputa na isi okwu n'okwu sitere n'aka onye ọ bụla na-ekwu okwu bịara ma anyị bipụtara ngwugwu aka. Ndị kwuru okwu ahụ hụrụ echiche ahụ n’anya n’ihi na ọ gara n’ihu ịkwalite ha. Ndị bịara ya nabatara ya nke ukwuu, anyị wee bulie ya otu ọnwa mgbe ihe omume ahụ gachara nye ndị bịara wee zigara ha ha. Ndị bịaranụ nwetara ihe ndina ụlọ site na nnọkọ ndị ahụ ha furu efu, anyị nwekwara ohere iji wulite mmata nke ika anyị.
Ndị ụlọ ọrụ na-etinye ego dị ukwuu na azụmaahịa na nzukọ, mana ọ na-esikarị ike ịhapụ ha. N'ime ime ụlọ nke ọtụtụ narị ụlọ ntu ndị ọzọ, ị ga-amata ọdịiche dị iche na ịchọta gị.
Ọ bụrụ n’inwere ndụmọdụ ndị ọzọ enyerela gị aka n’ihe ngosi ahia, ọ ga-amasị m ịnụ ha na nkwupụta ahụ!
Tags: ogbako ahiaihe ngosi ahiaụlọ ahịa ihe ngosi ahia
Figma: Design, Prototype, and Collaborate Across Enterprise Na-echekwa